Ma yahay lambarkayga sooshalka bulshada iyo sida loo helo nuqul | Dhaqaalaha
Muxuu yahay nambarkayga sooshalka bulshada iyo sida loo helo nuqul
Lambarka amniga bulshada Waxay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah dukumiintiyada ugu muhiimsan ee dhammaanteen ay tahay inaan lahaanno, maadaama badanaa loo baahan yahay marka la fulinayo nidaamyo taxane ah. Hadaad rabto inaad ogaato taada lambarka ka mid noqoshada amniga bulshada, Marka xigta waxaan kuu sheegi doonaa sida loo helo si aad u fuliso nooc kasta oo habraac ah.
1 Waa maxay Lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti?
2 Ayaa heli kara lambarka amniga bulshada?
3 Sideen ku ogaan karaa lambarkayga sooshal sekuuriga uu yahay?
4 Halkee laga shaqeeyaa lambarka sooshal sekuuritiga?
5 Maxaan ubaahanahay si aan uga baaraandego lambarkayga sooshal sekuuritiga?
6 Wax ka beddelka lambarka amniga bulshada
7 Nuqul dukumenti ah isku xirnaanta amniga bulshada
Waa maxay Lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti?
El Lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti, Sidoo kale loo yaqaan nambarka ku xirnaanta amniga bulshada, waa lambar u gaar ah oo ka kooban 9 lambar waana ku qasab dhammaan muwaadiniinta Isbaanishka ah ee ka fekeraya inay shaqeeyaan. Sidoo kale, dhammaan dadka ka faa'iideysta hawlgabka ama, meeshii ku habboon, faa'iido, sidoo kale waxaa ku waajiba inay helaan lambarkan dammaanadda bulshada.
Si aad u toos ah, La'aan lambarka sooshiyal sekuyuuritiga, qofku ma fulin karo nashaadaad kasta oo shaqo oo lacag leh Hadaad sameysana, waxaad ku sameyn laheyd si sharci daro ah. La'aanta lambarkani waxay ka dhigan tahay in muwaadinku aanu ku xirnayn nidaamka amniga bulshada sidaa darteedna uusan marin u heli karin dhammaan faa'iidooyinka uu nidaamkani bixiyo.
Lambarkan waxaa looga baahan yahay dadka markay shaqo raadinayaan, markay ugu dambayn helaan mid ama si fudud markay doonayaan inay iska diiwaangeliyaan Xafiiska Shaqada.
Ayaa heli kara lambarka amniga bulshada?
Dhammaan muwaadiniinta sharci ahaan ku deggan Spain waxay heli karaan lambarka ku xirnaanta amniga bulshada. Shirkadaha dhexdooda, shaqaaluhu way heli karaan dukumintigan maadaama ay lagama maarmaan u tahay inay qabtaan hawl kasta oo shaqo ah. Sidoo kale, lambarkan waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo Agaasimayaasha Gobolka ee Khasnada Guud ee Amniga Bulshada ama iyada oo loo marayo maamullada.
Waxaa xusid mudan in nambarkan sooshal sekuuritiga aan la helin oo kaliya marka aad shaqada bilowdo. Dadka aan weligood wax ku darsan ama aan qaan gaarin, sidoo kale waxay yeelan karaan a lambarka ka mid noqoshada amniga bulshada. Xilligan la joogo qofka la yiri wuxuu bilaabayaa waxqabad kasta oo shaqo ah, lambarkaas wuxuu noqonayaa lambar xiriir oo go'aaminaya ka mid noqoshada nidaamka amniga bulshada.
Waxaa muhiim ah in la yiraahdo ma lahaan kartid lambarro dhowr ah oo amniga bulshada ah, in kasta oo ay run tahay in ay jiraan kiisas ay dadku leeyihiin lambar kale oo amniga bulshada ah oo ka dhashay qalad maamul. Markay wax sidan oo kale ah dhacaan, waxa ay sameyso Lambarka Bulshada waa isku xirka lambarrada oo dhan oo go aansada kaliya mid ah tan ugu weyn, badanaa kan ugu isticmaalka badan nidaamka.
Sidoo kale waa in la caddeeyaa in lambarka kaarka caafimaadka ku yaal aanu ahayn lambarka sooshal sekuuritiga. Waxa dhacaya waa in lambarka ka muuqda kaarka la soo saaray iyadoo lagu saleynayo lambarka amniga bulshada. Tani waa sababta ay tirooyinku guud ahaan isu egyihiin, hase yeeshee kaarka la tusay laba lambar oo dheeri ah oo u dhigma lambarka gobolka ee ku-xirnaanta nidaamka uu ka dhacay, iyo sidoo kale lambar isdaba-joog ah.
Haddii xarafka B lagu muujiyey gadaashiisa taxanaha kaarka caafimaadka, tani waxay ka dhigan tahay in qofku helo daryeel caafimaad sidii ka-faa'iideyste, oo ay ku jiraan xaaskiisa oo aan lahayn dakhli ama carruur aan shaqeynin, oo ka socda qofka xaq u leh inuu ku helo leedahay. Qof kastaa wuu isdiiwaangalin karaa si uu u helo lambarka sooshal sekuuritiga, sidoo kale waa suurtogal in laga saaro rukunka.
Intaas oo keliya maahan, isagaa iska leh nidaamka amniga bulshada wuxuu awood u leeyahay inuu tirtiro tiradaas haddii ay dhacdo in la go'aamiyay in la siiyay iyada oo aan xaq loogu lahayn.
Sideen ku ogaan karaa lambarkayga sooshal sekuuriga uu yahay?
Si aad u ogaato waxa ay tahay lambarkaaga sooshal sekuuritiga, waa in aad ku jirtaa shaqo, ama, haddii ay khuseyso, aad horay u soo shaqeysay. Tan waxaad ka heli doontaa dhowr dariiqo oo aad ku hubin karto lambarkaaga ku xirnaanta soshal sekuuriska adiga oo adeegsanaya kaarkaaga caafimaadka, mushaarka bangiga, iyo kuwo kale.
Mid ka mid ah hababka ugu fudud ee lagu ogaan karo lambarkaaga sooshiyal sekuyuuritiga waa adigoo soo waca lambarka taleefanka ee adeegga macaamiisha: 901502050 XNUMX XNUMX. Lambarkan, qofka kaa soo xaadirayaa wuxuu ku siinayaa jadwal si aad toos ugu aaddo xafiiska sooshal sekuuritiga iyo hel lambarkaaga.
Hadda, haddii aad hadda shaqeyneyso, liiska mushaharka waxaad sidoo kale ka heli kartaa lambarka sooshal sekuuritiga. Caadi ahaan waxaad ka heleysaa meesha ugu sareysa ee mushaharka dhibna kuma lahan haddii ay tahay mushaar hore, maadaama lambarka soshal sekuku uusan waligiis isbeddelin, had iyo jeer waa isku mid.
Intaa waxaa sii dheer, waad ogaan kartaa lambarkaaga sooshiyal sekiyuuriti, waxaad ka heli kartaa warqad dhakhtar qoro, maadaama macluumaadkani sidoo kale halkaas ka muuqdo. Qandaraasyada shaqada ee lala saxiixdo shirkadda, lambarkan sidoo kale waa la muujiyay.
Waxa kale oo aad ku ogaan kartaa lambarkaaga ka mid noqoshada sooshiyal sekuyuuritiga ah adigoo tagaya xarunta bukaan socodka oo aad si fudud u codsan karto, laakiin tan waa inaad soo bandhigtaa aqoonsigaaga.
Waxaad sidoo kale aadi kartaa Qasnadda Bulshada ee Bulshada si aad uga hesho macluumaadkan, iyo waliba nuqul kaarka caafimaadka ah.
Intaa waxaa dheer, the Waxa kale oo aad ku ogaan kartaa lambarkaaga sooshiyal sekuyuuritiga adigoo galaya websaydhka oo isticmaalaya "Dukumintiga Xubinnimada Nuqul", kaas oo habka loo sameeyo iyada oo loo marayo fariin qoraal ah oo SMS ah. Tani hadday dhacdo cidda danaynaysa waxay hore u siisay Khasnadda Guud ee Amniga Bulshada lambarka taleefanka gacanta.
Marka la sameeyo codsi lambarka, qofku wuxuu helayaa farriin qoraal ah oo SMS ah, taas oo u oggolaanaysa inuu helo lambarka sooshal sekuuritiga, daabaco ama si fudud ula tashado.
Halkee laga shaqeeyaa lambarka sooshal sekuuritiga?
Hadda waxaan ku tusnay sida loo ogaado lambarkaaga amniga bulshada, waxaa la joogaa waqtigii laga hadli lahaa halka laga helo lambarkaaga amniga bulshada. Marka hore, waa muhiim inaad ogtahay in haddii aadan waligaa horay u shaqeyn oo aad rabto inaad bilowdo shaqada, dukumiintigaan lagu codsan doono shaqo kasta.
Waxa caadiga ah waa inaad buuxisaa codsi mar dambe aad u soo bandhigi doonto Maamulka Khasnada Guud ee Amniga Bulshada. Codsigan waa inaad ku caddeysaa cinwaanka shirkadda aad damacsan tahay inaad ka shaqeyso. Ha iloobin in dhammaan codsiyada ku saabsan ka mid noqoshada amniga bulshada waa in la fuliyaa ka hor inta aanad bilaabin shaqada.
Maxaan ubaahanahay si aan uga baaraandego lambarkayga sooshal sekuuritiga?
Dhammaan codsiyada diiwaangelinta nidaamka amniga bulshada waa inay ku jiraan macluumaad la xiriira jimicsiga hawsha aad qaban doontid. Dareenkan, waxaa lagaa codsanayaa macluumaadka soo socda:
Magaca ama magaca shirkadda shirkadda dhiirrigelisa diiwaangelinta
Xeerka Xisaabaadka Ku-biirinta Shirkadda
Waa inaad sidoo kale sheegtaa Qorshaha Sooshiyaal Sikiyuuriti
Magacyadaada iyo magacaaga oo buuxa
Taariikhda bilowga shaqada
Wax ka beddelka lambarka amniga bulshada
Mararka qaarkood waa lagama maarmaan in wax laga beddelo lambarka sooshal sekuuritiga, haddii ay dhacdo waa inaad u tagtaa Maamulka u dhigma ee Khasnadda Guud ee Amniga Bulshada. Soo bandhigida DNI oo ay weheliso soo bandhigida DNI, dhamaan dukumintiyada cadeynaya baahida loo qabo wax ka badalida lambarka soshal sekuyuur waa in sidoo kale lasoo bandhigaa
Haddii ay dhacdo in ay jirto su'aal ku saabsan kaarka caafimaadka bulshada, markaa waa lagama maarmaan in la aado xarun daryeel caafimaad aasaasi ah ama bukaan socod eegto bukaan socod eegto ah oo ku taal ismaamulka bulshada u dhiganta.
Nuqul dukumenti ah isku xirnaanta amniga bulshada
Tani waa adeeg ay bixiso bogga rasmiga ah ee Maamulka Khasnadda Guud ee Bulshada oo u oggolaanaysa dhinacyada danaynaya, ma aha oo keliya inay helaan, laakiin sidoo kale inay daabacaan ama, meeshii ay ku habboon tahay, kala tashadaan khadka tooska ah, nuqul ku meelgaar ah oo lambarka amniga bulshada ah.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in adeegani uu diiradda saarayo kaliya muwaadiniintaas kuwaas oo horeyba loogu qoondeeyey lambarka xiriirinta amniga bulshada. Adeeggu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isla markaaba eegto oo aad la tashato nuqul ku-meelgaar ah oo lambarka ku-xirnaanta amniga bulshada, oo sidoo kale loo yaqaan dukumiintiga ku-xirnaanta.
Iyadoo aan loo eegin adeegsiga loogu talagalay, adeeggu wuxuu u oggolaanayaa dhinacyada daneynaya inay ku soo dejistaan ​​dukumintigan qaab feyl ah PDF ama, meeshii ku habboon, si fudud uga daabacan internetka.
Dukumeentiga wuxuu ka kooban yahay macluumaadka soo socda ee qofka codsanaya:
Magaca iyo magaca qoyska
Xogta aqoonsiga DNI ama NIE
Lambarka amniga bulshada, ama haddii howlo shaqo la qabtay taas oo keeneysa in la sameeyo nidaamka amniga bulshada, tirada ka mid noqoshada nidaamka amniga bulshada.
Marka laga soo tago kor ku xusan, adeeggu wuxuu shaqeynayaa oo keliya haddii shuruudo guud oo gaar ah la buuxiyo, kuwaas oo nidaamka hawlgalku u muuqdo, kuwaas oo noqon kara Windows, Linux iyo Mac, noocyadooda ugu dambeeyay, daalacashada shabakadaha sida Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, iyo sidoo kale Java 6 mashiinka dalwaddii ama nooc ka sareeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Shaqada » Muxuu yahay nambarkayga sooshalka bulshada iyo sida loo helo nuqul
Waxay tilmaami karaan halka lambarka SS laga helo Kaarka Caafimaadka, waa waxa ugu fudud ...
Kireynta vs kireysiga
Immisa sano ayey tahay inaad ku biiriso aruurinta lacagta hawlgabka ee ugu yar?